यी हुन ८ भाग्यमानी नेपाली, जो पृथ्वीको कुनै ठाँउ हैन मंगल ग्रह घुम्न छानिए – Setosurya
मंगल ग्रहको यात्रामा पठाइने एक हजार ५८ जना छनोट भएका छन् । सन् २०२४ मा हुने एकतर्फी ‘मार्स वान’ नामक यात्रामा पहिलो चरणमा चार पुरुष र महिला पठाइनेछ । नेदरल्याण्डको ‘मार्स वान’ ले सुरु गरेको यो अभियानमा सहभागी हुन १ सय ४० देशका २ लाखले आवेदन दिएका थिए । उनीहरुबाट एकहजार ५८ छनोट गरिएको हो । उनीहरुमा ५ सय ८६ पुरुष र ४ सय ७२ महिला छन् । ३ सय ५७ जना भने २५ वर्ष मुनिका रहेका छन् ।
मंगल ग्रहमा जानका लागि सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट २ सय जना छनोट भएका छन् । क्यानडाबाट ७५, भारतबाट ६२ र रुसबाट ५२ जना छानिएका छन् । अष्ट्रेलियाबाट ४३, चीनबाट ४०, बेलायतबाट ४० छन् । एशियाबाट २ सय १८ जना छन् । पहिलो चरणमा छानिएका अधिकांश रोजगार छन् । छनोटमा परेका मध्ये ८ सय १३ रोजगार छन् भने १ सय ६४ स्कुले जीवनमै छन् । ८१ जना भने बेरोजगार रहेका छन् । मंगल ग्रहको यात्राका लागि छानिएका १ हजार ५८ जना १ सय ७ देशका छन् । मार्स वानले सूचीमा परेका सवै देशका प्रतियोगीहरुको नामावली भने सार्वजनिक गरेको छैन् । जसका कारण आबेदकमध्ये कति नेपाली छानिए भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन्
को-को थिए नेपाली आवेदक ?
मार्स वानका अनुसार मंगल ग्रहको यात्राका लागि ८ जना नेपालीले आवेदन दिएका थिए । त्यसरी आवेदन दिनेमा प्रकाश सुवेदी, गणेश, केशव पावडे, सम्राट कार्की, दिवस श्रेष्ठ, अनिल, समिर न्यौपाने र मदनकुमार दाहाल थिए ।
यीमध्ये प्रकाश २९ र सम्राट ३३ वर्षका छन् भने कम्प्युटर अध्ययन गरेका मदन ३२ वर्षका छन् । ३१ वर्षका केशव पर्यटन क्षेत्रका काम गर्छन् । नेपालमा जन्मिएका अनिल १२ वर्षको उमेरदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । दिवस अष्ट्रेलियामा बस्छन् भने २१ वषर्ीय समीर वेबसाइट डेभलपर हुन् । ३३ वर्षका गणेशले आफू एक सामान्य मानिस भएको बताएका छन् ।
मार्स वानका संस्थापक बस लान्सडोपले भनेका छन्-‘हामीले शारीरक र मानसिक रुपमा स्वस्थ भएकाहरुलाई छनोट गरेका छौं । उनीहरु मंगल ग्रहमा मानव दूतका रुपमा जानेछन् ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा छनोट नभएकाहरुलाई इमेल गरेको छ, जसले पुनः आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मंगल ग्रह यात्राको प्रक्रिया
पहिलो चरणमा छनोट भएकाहरुको २०१५ सम्म विभिन्न परीक्षण हुनेछ । दोस्रो चरणको छनोटमा २० देखि ४० जनाको क्षेत्रीय समूह बनाइ स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ भने तेस्रो चरणको छनोट निकै कठिन हुनेछ । परीक्षण एवं तालिममा मंगल ग्रहको जस्तै वातावरणमा बस्नुपर्नेछ ।
सन् २०१८ मा मानवरहित मिसन पठाइनेछ भने त्यसपछि मानिस पठाइनेछ भन्दै अनलाइन खबरले लेखेको छ !
लगिदिने मात्र हामीले हो, फर्काउन चाहिँ फर्काउँदैनौँ, वन वे टिकट मात्र हो भन्दाभन्दै मंगल ग्रहमा जाने पहिलो मानव बन्नका लागि आतुर विश्वभरका करिब एक लाख जनाको भिडमा चार जना नेपाली पनि रहेछन्। नेदरल्यान्ड्सको गैरनाफामुखी संस्था मार्स वन फाउन्डेसनले दरखास्त आह्वान गरेको दुई सातामै एक नेपाली प्रकाश पी. सुवेदीले नाम दर्ता गराएका थिए। निवेदन दिने म्याद सकिनै लाग्दा अरु तीन जना नेपाली पनि थपिएका छन्।
अरुलाई त भेट्टाउन सकिएन, नेपाली उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा कान्छा २१ वर्षका समिर न्यौपानेसित भने कुरा गर्न पाइयो। काठमाडौँमै रहेछन् उनी। आखिर ज्यान जोखिममा हाल्दै फर्कनै नपाउने अनकन्टार ग्रहको यात्रामा जान किन लालायित छन् उनीहरु ?
नेदरल्यान्ड्सको गैरनाफामुखी संस्था मार्स वनले मंगल ग्रहमा १० वर्षपछि चार जना अन्तरिक्ष यात्रीलाई पठाउँदैछ। अरु स्पेस मिसनभन्दा फरक यसको विशेषता के हो भने त्यहाँ पठाउनका लागि अन्तरिक्ष यात्रीहरु विश्वभर प्रतिस्पर्धाबाट छानिँदैछन्। यही विशेषताका कारण विश्वभरका मिडियाले यो प्रक्रियालाई चासो दिएर हेरिरहेका छन्।
नेसनल जोग्राफिकदेखि लस एन्जलस टाइम र फक्स न्युज आदिसम्मले यसका खबर दिएका छन्। खासमा यो संस्थाले मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउन लागेको हो। यसका लागि पहिलो लटमा चार जनालाई सन् २०२३ मा उडाइनेछ। अहिले विश्वभरबाट १८ वर्ष पूरा भएकाहरुबाट यसैका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो। चार जना छान्न विभिन्न प्रक्रिया अपनाइनेछ, तालिम दिइनेछ। त्यही लाइनमा चार नेपाली समीर न्यौपाने, प्रकाश पी. सुवेदी, अनिल र केशव पाब्दे भेटिएका हुन्।
हाम्रो देश नेपाल प्राविधिक विकासमा पछि परेको छ। यो देशलाई संसार भर चिनाउनको लागि र सबैलाई ठूलाठूला काम गर्न प्रेरणा दिनको लागि मैले “मार्स वन” मा भाग लिएको हुँ। वन वे ट्रीप जोखिमपूर्ण भए पनि म मेरो देश र सबै मानव जातिको प्रगतिको लागि यो मिसन सफल पार्न चाहन्छु ।
२९ वर्षीय प्रकाश पी सुवेदी। उनी आफूलाई नयाँ ठाउँ, नयाँ बाटोमा अभिरुचि रहेको बताउँछन्। त्यस्तै २९ वर्षीय अनिल पोखरेल नेपालमा जन्मिए पनि १२ वर्षको उमेर मै अमेरिका पुगे र अहिले उनी त्यहीँको नागरिक भइसकेका छन्। अर्का नेपाली ३१ वर्षीय केशव पाब्दे पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्छन्। एडभेञ्चर गर्न र नयाँ कुरा हेर्न र अनुभव गर्न रुचि भएको उनले बताएका छन् ।
कसरी भएको थियो प्रकाश दाहालको मृत्यू ? यस्तो थियो उनको अवस्था :
जर्ज बुससँग माओवादीलाई ‘फिनिस’ गर्न अमेरिकाबाट आएका देउवा अहिले के गर्दैछन् ?
सिमकोटमा तारा एयरको विमान दुर्घटना (भिडियो सहित)
राजनीतिको पुर्पक्षमा प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सी
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले फर्कायो ओली र प्रचण्ड लाइ असर पर्ने गरि यस्तो कडा जवाफ !